Srebrenica : kaoperativam-behivavy manjaitra «arotava fiarovana ho an’ny rehetra» · Global Voices teny Malagasy
Srebrenica : kaoperativam-behivavy manjaitra «arotava fiarovana ho an'ny rehetra»
Arotava mihoatra ny 1.000 no vaozaitra sy nozaraina teo an-toerana
Nandika (fr) i Nastainou Njapndounke
Voadika ny 30 Septambra 2020 17:10 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Ελληνικά, русский, Deutsch, Français, English
ireo mpikatroka (ankavia miankavanana) Valentina Gagić-Lazić, Hilda Đozić, Jelena Bibić ary Željka Milovanović ao Srebrenica, Bosnia Herzagôvina (May 2020). Sary an'i Ahmedin Đozić nampiasàna lisansa Balkan Diskurs, fampiasàna nahazoana alàlana.
Ity lahatsoratra nosoratan'i Ahmedin Đozić ity dia nivoaka voalohany tamin'ny 01 Jolay tao amin'ny Balkan Diskurs, tetikasa iray an'ny Ivontoerana Fikarohana Aoriana Fifandonana (CRPC). Dika nokirain'ny Global Voices no avoaka eto ambany noho ny fifanarahana mifampizara votoaty.
Srebrenica dia tanàna iray any amin'ny fari-piadidiana ao amin'ny faritra atsinanan'ny Republika Srpska, iray ao anatin'ny Bosnia-Herzegôvina. Tanàna kely iray an-tendrombohitra misy mponina miisa 2.600 eo ho eo ao anatin'ireo tangorona ahitàna vahoaka manodidina ny 13.400. Ny toerana fitrandrahana sira sy ny spa no tena seha-pihariana ao aminy. Nandritra ny ady tao Bosnia, i Srebrenica no toerana nisehoan'ilay fandripahana lehilahy sy tanora bosniaka nihoatra ny 8.000 tamin'ny Jona 1995. Taty aoriana io fandripahana io dia nantsoina hoe hetsika fandringanana foko nataon'ny TPIY [Tribonaly Iraisampirenena napetraka ho an'i Yogôslavia teo aloha] sy ny Fitsaràna Iraisampirenena (CIJ).
Nisy andiam-behivavy avy ao Srebrenica nihetsika nanoloana ny valanaretina coronavirus tamin'ny alàlan'ny fanamboarana maska arotava nozairina tànana ho an'ireo olona manodidina azy ireo.
Valentina Gagić-Lazić, iray amin'ireo mpiara-nanorina ny fikambanana Sara-Srebrenica, ivondronan'ireo vehivavy « mizakatena », nefa koa mpikatroka efa hatry ny ela tao Srebrenica hatramin'ny nipetrahany tao nanomboka tamin'ny 1995, no manazava ny niandohan'io hetsika io :
“Nismo željeli potencirati da su to djela samog udruženja, već pojedinaca. Ibrima Halilović, zaposlenica fondacije MI BOSPO je reagovala prva. Javila nam se i rekla da želi da šije, ali da nema šivaću mašinu. Brzo smo razmijenili ideje i došli do rješenja. Stavili smo na raspolaganje sve resurse koje smo imali u Udruženju, poput mašina, materijala i konca. Ubrzo smo organizovale prostor koji smo formirali kao malu radionicu.”
Tsy hoe fotsiny te-hihetsika amin'ny maha-fikambanana izahay, fa amin'ny maha-olona. Ibrima Halilović, mpiasan'ny MI BOSPO no olona voalohany namaly ny antsonay. Nifandray taminay izy ary niteny taminay fa vonona ny hanjaitra saingy tsy manana milina fanjairana. Nifanakalo hevitra vitsivitsy haingana izahay ary dia nahita vahaolana. Nomenay azy daholo izay fahafahana azon'ny fikambanana natolotra: milina fanjairana, ny lamba, ny kofehy. Nanamboatra toerana kely ho toerana fiasàna ihany koa izahay.
Vehivavy enina no nanomboka ny fikambanana. Telo tamin'izy ireo no nanjaitra ny arotava, ary ny hafa manasa sy mipasoka ary manitsy azy ireny.
« Ny tanjona dia ny hampiseho amin'ireo mpiray tanindrazana fa eo anilan'izy ireo hatrany izahay mandritra ity vanimpotoana sarotra ity. Antenainay ireny arotava ireny fa mba hahafahan-dry zareo hahatsapa hoe voaaro kokoa ry zareo. Tsy marobe izahay aty Srebrenica, izany no antony tsy maintsy iraisanay hina ao anatin'ny fiombonana sy ny fifanampiana. Azo antoka fa efa nanomboka fantatra ny asa ataonay, satria efa mihamaro ireo olona tonga manohana anay. Misy ireo vehivavy manolo-tànana anay, amin'ny fanomezana fitaovana sy amin'ny fitondràna fanampiana amin'ny fomba maro hafa isankarazany. Afaka mitondra fanampiana amin'ny sehatra misy azy daholo ny tsirairay. Tsapa ilay fanahin'ny firaisankina nandritra ity vanimpotoana ity », hoy izy nanampy.
Željka Milovanović (havia) sy Hilda Đozić no nanjaitra ireo arotava fiarovana ho an'ireo mponina ao Srebrenica sy ireo tanàna mpifanolo-bodirindrina. Sary an'i Ahmedin Đozić/Balkan Diskurs, nahazoana alàlana ny fampiasàna azy.
Hita ao anatin'ity vondrona mavitrika ity ireo vehivavy avy amin'ny sehatr'asa isankarazany, samy vonona avokoa hanatratra tanjona mitovy: hanohana ny vondrompiarahamonina misy azy ireo. Ireto avy ry zareo vehivavy mpikambana ao anatin'io vondrona io : Valentina Gagić-Lazić, Stana Medić, Željka Milovanović, Hilda Đozić, Jelena Bibić sy Ibrima Halilović.
Valentina Gagić-Lazić mitondra ny fanampiany amin'ny fanasàna, ny fanitsiana ary ny fipasohana ireo arotava, raha i Stana Medić kosa – iray amin'ireo mpiara-manorina ny Sara-Srebrenica – mandray anjara amin'ilay hetsika ka manjaitra ireo arotava any an-tokantranony noho ny toepahasalamàny tena marefo.
Željka Milovanović indray nanjohy ilay vondrona tamin'ny fampiasàna ny milina fanjairany manokana. Mpiasa ao amin'ny orinasa EKONOMIK izy, mpamokatra “conteneurs” vata vy mora arafitra. Ireo mpiaramiasa aminy ao Srebrenica dia mjiery azy amin'ny maha- vehivavy be herimpo tsy mihemotra manoloana ny olana raha vao resaka hoe fanampiana ny vondrompiarahamonina misy azy no resahana.
Hilda Đozić, dia mpiasan'ny House of Good Tones — tetikasa iray ara-kolontsaina ho an'ny ankizy — ary mpikambana iray mavitrika ao amin'ny vondrompiarahamonina misy azy, miandraikitra ny fanitsiana ireo arotava sy ny fitsinjaràna azy ireny. Nihetsika haingana nanoloana ilay krizy ara-pahasalamàna, nifanaraka tamin'ny mpitantana ao amin'ny House of Good Tones i Hilda Đozić mba hahazoana toerana iray hiasan'ny vondrona.
Mbola iray mavitrika ihany koa ao anatin'ny vondrompiarahamoniny i Jelena Bibić, manitsy sy mikarakara ireo arotava alohan'ny dingana fanjairana azy, ary manampy azy ny zanany vavy.
Ireo tànana mikaly fatratra nentin'ireo mpikatroka sady mpikambana ao amin'ny fikambanana Sara-Srebrenica nanjaitra ireo arotava fiarovana niisa 1.000 tao anatin'ny fotoana fohy. Sary an'i Ahmedin Đozić/Balkan Diskurs, fampiasàna nahazoana alàlana.
Izy ireo nifanotrona, arotava 1.000 no vaozaitra sy vaozara ho an'ireo mpiasa tamin'ireo toeram-pivarotana teo amin'ny manodidina, tany amin'ny farmasia, ho an'ireo zokiolon ao anatin'ny vondrompiarahamoniny ary ireo olona hafa sy ny mponina amin'ireo vohitra mpifanolo-bodirindrina.
Tohizan'ny Sara-Srebrenica ny famaliana ny filàn'ny vodnrompiarahamonina eo an-toerana ary mitatra manodidina, amin'ny fiarahana miasa amin'ny biraon'ny Vokovoko Mena sy ny Fiarovana ny sivily ao Srebrenica, tanjona amin'izany ny anaovana izay hahafahan'ny rehetra mahazo ireo fitaovana rehetra vokariny. Raha mbola mitohy ny famokarana arotava, ny filàna kosa mitombo, miaraka amin'ny fametrahana ireo fepetra takiana amin'ny tsy maintsy hitondràna arotava.
« Ny mba hitondra ny fandraisanay anjara mandritra ity krizy ity no nivondronanay. Te-hanao zavatra mivaingana sy ilaina izahay, toy ny efa mahazatra anay. Tamin'ny fomba nandeha ho azy fotsiny izao no nihetsehanay. Zavadehibe ho anay ny mizara ny fanahin'ny firaisankina mandritra izao vanimpotoana manahirana izao. Tsy maintsy manao izay rehetra tratry ny herinay izahay. Mino aho fa ho an'ny tsirairay taminay dia izany no hery nanosika ny hetsika», hoy ny nambaran'i Valentina Gagić-Lazić.
Amin'ny fitondrana fanampiana amin'ny fomba samihafa ho an'ireo mpiray vodirindrina amin-dry zareo ao anatina vanimpotoana tena mahabe ny filàna, dia ampahatsiahivin'ireo mpikambana ao anatin'io vondrona mpitondra zavabaovao io ny hery ananan'ireo vehivavy feno fahavononana hanohana ny vondrompiarahamonina misy azy ireo.
7 ora izayRosia